“Hogamiyayaasha Dowladd Goboleedyada waa in kulankoodu uusan noqon…
Cismaan Maxamed Cali (Cismaan Dheere) Wasiirkii hore Dastuurka iyo Dib u heshiisiinta Dowlad Goboleedka Galmudug oo la hadlay Axadle waxa uu Hogamiyayaasha 9-ka bishaan July ku kulmeysa Dhuusamareeb ugu baaqay in ay xal ka gaaraan doorashada dalka.
Hogamiyayaasha Dowlad Goboleedyada waxa uu ugu baaqay in wada hadalkooda diiradda ay ku saaraan sida loo dhalin karo wada xaajood xal u noqda in ay qabsoomto doorasho waqtigeeda ku dhacdo.
“Xalka ugu horeeyo ee shirka waa in ay isu yimaadaan Hogamiyayaasha Dowlad Goboleedyada halkii ay kala joogi lahaayeen meelo kala fog, tan kale waa in ay ka arrinsadaan Doorashada dalka oo natiijada kasoo baxdo fadhigooda xal u noqon karto ama xaalka kasii dari karo” ayuu yiri Cismaan Dheere.
Waa uu sii hadlay waxa uuna yiri “Hogamiyayaasha Dowlad Goboleedyada waa qayb kamid ah saamileyda siyaasadda ee salka u ah doorashada, Haddii xifaaltan iyo dano gaar ah lasoo dhigo miiska wada hadalka, ma suuragaleyso in xal la gaaro, waxa laga doonayo waa in ay danta guud hormariyaan”.
Cismaan Maxamed Cali (Cismaan Dheere) waxa uu Hogamiyayaasha Dowlad Goboleedyada u jeediyay in wax ay ka bartaan caqabadihii horay loosoo arkay, halka Xukumadda Federaalka uu ugu baaqay in Maamul Goboleedyada ay siiyaan kaalinta Dastuuri ay leeyihiin.
“Arrinta la xiriirta Dastuurka dalka ee u madax banaanta howlaha iyo qabashada waajibaadka DFS iyo Dowlad Goboleedyada waa mid aan laga maarmin had iyo jeer, Dowlad Goboleedyadu yaysan ka tallaabin xadkooda, Dowladdu waa in ay u madax banaaneysaa awoodda dastuuri ee ay leeyihiin maamulada” ayaa yiri Wasiirkii hore Dastuurka iyo dib u heshiisiinta Galmudug.